Nude Bra Vanopa uye Fekitori - China Nude Bra Vagadziri
FASHION yepamusoro yepamusoro samu isina bhurukwa Backless strapless Bra kusimudzira kumusoro ingwe kupurinda inonamatira bra
Yakakwirira-viscosity inosimudza chigamba chechipfuva, dhizaini yemhete dhizaini, inotapira uye iri nyore kudhirowa, matatu mapatani kusarudza kubva. Hutano hwepanyama bio glue, yakanakira inonamira uye kwete nyore kuwa. Ida rubber pasi pasina glue dhizaini, inofema kuchengetedza chipfuva.
Vakadzi Vatsva Silicone Push Up vakadzi underwear Invisible Bra Kuzvishongedza Strapless Bandage Mahara Solid Bra
Mvura isingaonekwe inodonha silicone inosimudza chipfuva, uchishandisa zvakasikwa bio glue, hutano nekuchengeteka. Super viscosity haisi nyore kuwira pasi, isina mvura uye sweatproof. Simudza ruoko rwechifuva, yakapusa uye isingaoneki.
Sexy Vanhukadzi Nipple Yakavharwa Yekuyamwisa Mhuru Dzepasi Matete Pasties Kuyambuka Waterproof Kuzvishongedza Mucheka Chifukidzo Chikupu
Ichi chigadzirwa pentagram isingaoneki nipple tsvimbo. Sequin dhizaini, akasiyana-siyana mavara ekusarudza kubva, yakasikwa bio glue, isina mvura uye yekutsvaira-chiratidzo, kwete nyore kuwira pasi, inotapira uye inoyevedza.
Reusable Strapless isingaoneki yakarukwa Mwoyo-wakaumbwa puruzira kumusoro wakasungwa tambo bra Nipple chifukidzo chekupfeka
Mwoyo wakavezwa silicone diki chest chest sticker, yakasikwa bio glue, ine hutano uye yakachengeteka isina allergies. Kusina mvura uye ziya rinodzivirira, hazvisi nyore kuwira pasi. Iyo nzvimbo yerabha haina glue ventilation maburi, yakagadzikana uye inofema uye inodzivirira chipfuva.
Chinyowani chigadzirwa chakatsva
Kisimusi chinhu zvimiti, zvinosetsa uye zvakanaka, sarudzo dzinonakidza, mapfumbamwe emapatani kusarudza kubva. Hutano bio-kunamatira, isina mvura uye nekutsvaira-chiratidzo, kwete nyore kuwa. Kupenya. Izvo zvisingaonekwe uye zviri nyore
Silicone Push Up vakadzi underwear Invisible Bra Kuzvishongedza Strapless Bandage Mahara Solid Bra yevakadzi.
Kuzvishongedza, 100% yakachengeteka & ganda-inoshamwaridzika silicone, yakapfava uye yakagadzikana kupfeka, yakakodzera kune ganda rinonzwa. Yakasimba inonamira silicone inoenderana neyemucherechedzo wako uchigara panzvimbo, kufukidza iyo mazamu ese emawere nipple nzvimbo zvakatsiga. Iyo nzira inoshungurudza yekuenda bra-shoma.